TASC के हो? सबै सिक्न तपाईं TASC बारेमा जान्नु आवश्यक छ | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
TASC के हो? को TASC परीक्षण बारेमा पत्ता
TASC के हो? सबै सिक्न तपाईं TASC बारेमा जान्नु आवश्यक छ.
TASC के हो? TASC आफ्नो समझ र ज्ञान को परीक्षण छ. नाम TASC परीक्षण माध्यमिक समापन आकलन लागि छोटो छ ™. को TASC परीक्षण पारित तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय स्नातक गर्ने एक व्यक्ति जस्तै ज्ञान र सीप छ देखाउँछ.
किन महत्त्वपूर्ण छ?
धेरै अमेरिकी र शरणार्थी र आप्रवासी उच्च विद्यालय समाप्त गर्न सकेनौं. एक उच्च विद्यालय उपाधि बिना, यो एक राम्रो काम प्राप्त र संयुक्त राज्य अमेरिका मा सफल गाह्रो हुन सक्छ. तर तपाईं TASC परीक्षण पास यदि, तपाईं एक उपाधि प्राप्त (प्रमाणपत्र) आफ्नो राज्य बाट. यो एक उच्च विद्यालय equivalency भनिन्छ (HSE) उपाधि, त्यसैले तपाईं कहिलेकाहीं हेर्न वा सुन्न सक्छ आफ्नो परीक्षण एक HSE परीक्षण रूपमा उल्लेख.
को TASC उपाधि तपाईं बराबर छ भन्छ (उस्तै) संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले रूपमा कौशल. यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो! मात्र तपाईं शिक्षा हासिल हुनेछ, तर तपाईं राम्रो काम विकल्प हुनेछ.
को TASC परीक्षण मा के?
त्यहाँ परीक्षण मा पाँच विषयहरू छन्: सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, पढाइ र लेखन. को RCO मुक्त अनलाइन कक्षाहरू को परीक्षण मा प्रत्येक विषय कवर. जब तपाईं तैयार तपाईं एक वर्ग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. वा तपाईं परीक्षण मा के बारेमा थप सिक्न सक्छौं.
म अब के गर्नु पर्छ?
परीक्षण को लागि अध्ययन
बाहिर परीक्षण बारे थप पत्ता लगाउन
मेरो राज्य प्रस्ताव TASC गर्छ?
तपाईं हरेक राज्य मा TASC परीक्षण लिन सक्दैन. जो परीक्षण आफ्नो राज्य प्रस्ताव छ पत्ता लगाउन तलको तालिका हेर्न. यदि आफ्नो राज्य TASC प्रदान गर्दैन, तपाईं अझै पनि एक उपाधि प्राप्त गर्न सक्छन्. यी मध्ये एक लिंक परीक्षण बारेमा थप जान्न क्लिक गर्नुहोस् तपाईं आफ्नो राज्य मा लाग्न सक्छ:
• एक GED के हो® प्रमाण? • के हो HiSET ™?
जो परीक्षण म मेरो अवस्थामा लाग्न सक्छ?